China ichipomerwa mhosva yehurongwa hwekutsigira Uganda hydro plant |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » China yakapomera pamusoro pehurongwa hwekubhadhara mari yekuganda yeUganda
China yakapomera pamusoro pehurongwa hwekubhadhara mari yekuganda yeUganda
26 min kuverenga
china uye uganda
Makambani anokosha eUganda ekumisa rafting uye ekushanya ari kuita bhizinesi mumupata wepamusoro weNile ari pamusoro pezvirongwa zvekuvaka rimwe dhamu paNire.
Chibvumirano, chakaonekwa zvizere nemunyori wenhau, chakasainwa musi waChikunguru 18, 2007 pakati peInternational Development Association nehurumende yeUganda uye chinoverengwa muzvikamu zvakakosha: "Zvinosungirwa kuUganda pasi pechibvumirano cheRudzikinuro hazvichinjiki, zvakakwana uye hazvitenderwi," kusunga nyika kuti irege kuita chero chinhu chingakanganisa chikamu cherwizi chiri kutaurwa, chimwe chinhu chirimwa chitsva cheIsimba chirimwa manje chinoita sekunge hachina hanya.
Chikwata che "Save Adventure Tourism muUganda" chave kunyorera kuWorld Bank kuti vadzokerezve kudiwa kwekuzvipira kweUganda kuremekedza chibvumirano chakatemwa pamwe nekuratidza kukanganisika kwechirongwa chemadhamu, zvinofanirwa, sezvakataurwa munyori uyu nemitauro yakati wandei, sarudzo yeiri yepamusoro dhamu vhezheni yakaiswa.
Isu tinonzwisisa kuti ndimi vamiririri veWorld Bank muUganda, uye tanzwa kuti paive nenyaya yaizokufadzai, takatumirawo email yakafanana kuna Somin Mukheriji, uyo watinotenda kuti ndiye mutungamiriri weboka Bujagali Hydropower Chirongwa. Ndokumbirawo utibvumire kuti titsanangure, uye tigamuchire ruregerero kana zvimwe zvacho uchitozviziva.
Seyero yekudzora kubva kuBujagali Hydro Project muUganda chibvumirano cheKalagala Offset pakati peWorld Bank neHurumende yeUganda chakaumbwa kuchengetedza zvikamu zvakasara zverwizi mudunhu iri. Iyo Isimba Hydropower chirongwa ikozvino chinotyisidzira dunhu iro, nedura rakarongwa richizadza chikamu chakakosha chenzvimbo yakachengetedzwa.
Seboka revagari vane hanya, vatengesi uye vanhu vebhizinesi isu tinobata chikamu ichi cherwizi zvakanyanya kwazvo mumoyo medu. Zvakare nekuve inoshamisa nzvimbo, inopawo yakasarudzika uye yakasarudzika sosi iyo yakabvumidza iyo yese indasitiri yekushanya kuvaka mudunhu, ichigadzira mabasa mazhinji emuno nekusimbisa matunhu ezvekushanya.
Imwe yenyaya dzakakosha dzakauya yaive Kalagala Offset Chibvumirano. Zvakatsanangurwa pamusangano nenhengo ye Ministry for Energy dept. kuti nhengo dzeWorld Bank dzave mukukurukurirana neHurumende yeUganda nezve zvekuita nenyaya yekuti Isimba inotyora Chibvumirano cheKalagala Offset. Izvo zvakacherechedzwa nenhengo dzeMEMD kuti huwandu hwesarudzo hwaive kutariswa neWorld Bank nezve maitiro ekugadzirisa nyaya iyi. Izvo zvakatsanangurwa kuti imwe yemhinduro dzinogoneka dzaisanganisira kuendesa nzvimbo yeoffset kune imwe chikamu cherwizi.
Sevanhu vemunharaunda vanogara munzvimbo yeoffset, sevaridzi vemabhizinesi uye vanobatika muchibvumirano cheKalagala Offset, tinoshuvira kuve nechekuita mukukurukurirana maererano nechibvumirano cheOffset uye nekupa iro bhanga repasirese nezvatinotenda kuti ruzivo rwakakodzera kuita sarudzo .
Iyo nharo yakasimudzwa neMEMD yekuti chete 'diki chikamu' yenzvimbo yekuchengetedza ichafashirwa saka hachisi chinhu chikuru. Kunze kwekukakavadzana kuri pachena kwekuti iwe unogona kutyora chibvumirano, kana iwe usingaiti, pane zvakare kushaikwa kwakakosha mapoinzi akakosha atingade kukwidza kuWorld Bank kuti itariswe.
Kunyangwe isu tisingakwanise kufungidzira iyo World Bank ichibvumidza chirongwa ichi chekubvisa nzvimbo yekuchengetedza kure nenzvimbo iri kuparadzwa, tinoda kusimudzira kuramba kukuru kune iyi pfungwa kana iri kunyatso kuongororwa:
Sevatori vechikamu muKOA, sevanhu vakakurira padyo nerwizi uye neboka revanhu vane ruzivo rwakadzama rwemahombekombe erwizi ayo ari kutaurwa tiri kukumbira kubatanidzwa munhaurirano maererano nekuchinja kupi nokupi kweKOA
Tirikukumbirawo ruzivo rwamungatipe maererano neIsimba HPP uye kupindira kwayo muKOA
Izvo zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti iyi haisi nhamo yevanhu vashoma vane hanya. Vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvishanu, kusanganisira veUganda zviuru gumi nezviviri, pamwe nevanhu vanobva munyika dzinopfuura makumi matanhatu nemashanu vakaratidza kushushikana kwavo kuburikidza nechikumbiro pamusoro pekutyorwa kweKOA uye chimiro chikuru cheIsimba Dam, tinofara kukupai makopi eizvi kukumbira kana uchitenda kuchabatsira kuchengetedza nzvimbo yekuchengetedza. Zviuru zvevanhu vane hanya zvechokwadi nezveichi chikamu cherwizi uye nevanhu vemo vanogara chakatenderedza.
Ndatenda nekugadzira iyo KOA uye nezvako zvese kuyedza kusvika parizvino pakubatsira kuchengetedza ino yakanaka nzvimbo. Tinotenda rutsigiro rwako uye chero ruzivo iwe rwaunogona kupa.
Iyo Save Yekushanya Yekushanya muUganda Chikwata.
Kuve anga ari chikamu chezvekubvunzana kwenguva refu iyo World Bank yakatangira iyo Bujagali magetsi, payakatanga kurongerwa neAES, mutori wenhau uyu achiri kurangarira mamiriro uye kunzwisisa kuti nei chibvumirano cheoffset chakaiswa uye chero shanduko yemoyo neWorld Bank. izvi zvinogona kunge zvichipesana nekutyora chivimbo pakati peBhangi nehukama hwehukama hweUganda. Kutevera kuvhurwa kweBujagali makambani ekumisa rafting akatofamba achienda zasi, nemari yakadzama, mushure mekunge mabhuru makuru eBujagali akazara uye asisina basa rekukwirisa uye kayaking sezvo nyanza nyowani yakabuda kuseri kwedama remadziro.
Kana World Bank ikaenderera mberi nesarudzo yekufambisa saiti yeoffset pasina mubvunzo ingangokonzeresa mirawu mikuru kwete kwete chete kubva kumakambani eUganda asiwo nemasangano epasi rese seInternational River Network. Makore gumi nematatu apfuura vese vaive chikamu chekutaurirana nekukurukurirana izvo zvakaona kuyedza kweAES kwakarambwa kukwira zvisina mwero pamusoro penzvimbo inoitisa ruzivo rwekushanya muUganda nekushandisa zvakashomeka zvakashomeka zvemari yekushanya mukufungidzira kwavo uye fungidziro, izvo zvazviri parizvino yakaratidza kuve yenhema zvachose uye yakaburitswa senge chiutsi cheutsi chakaiswa nevanozvishandira vanopa mazano vaishandiswa neAES panguva iyoyo.
Iwo makambani ekushambadzira muJinja akashandisa pfupiso yemushumo wavakatumira gore rapfuura, vachiratidza kukanganisika uko sarudzo yemadziro emadziro ingakonzera mabhizinesi avo zvinoita kuverenga kunonakidza:
Independent Tourism uye Economic Impact Ongororo yeiyo Isimba Hydropower Chirongwa
Rwizi rweNile, Uganda
Yakagadzirirwa ne: E & D Yekubvunzurudza Services mukubatana neImani Development
Pfupiso yeZviwanikwa Zvakakosha
Sechikamu chehurongwa hwekugadzirisa kushomeka kwesimba kwekuwana magetsi kuUganda, Hurumende yeUganda yakagadzira chirongwa cheHydropower Master Chirongwa chekuona zvinokwanisika mapurojekiti emagetsi emagetsi. Imwe yemapurojekiti akaonekwa mu Master Plan chirongwa chakatsanangurwa cheIsimba Hydropower Project. Kunze kweanogona kuita makuru emagetsi eprojekti akacherekedza chirongwa ichi chinogadzira mashoma mashoma emagetsi. Kubudikidza nekushambadzira kwakasiyana kwenhau uye webhusaiti kuvakwa kweIsimba Dam kuri kuratidzirwa kutanga munguva pfupi iri kutevera.
Vashandi vezvekushanya muJinja vakangobvunzwa muchidimbu uye vanotenda kuti zvakazara chirongwa chakarongedzwa hachina kutariswa zvizere, nekudaro, vakakumbira ino yakazvimirira yekushanya uye kuongorora kwehupfumi kuti vape vanoita zvisarudzo rumwe ruzivo rwekufunga.
Ichi chikamu cheRwizi rweNile chakawanikwa chakasarudzika mukuti chinogadzirira kwese hunyanzvi hunyanzvi kubva kune vanotanga kayaker uye rafting vashanyi, kusvika kune vepasirose vepasirose-vepasi rose. Mamiriro ekunze anodziya pamwe chete nenyaya yekuti huwandu hwemvura hunoramba huripo gore rese, zvinoita kuti chikamu ichi cheNire chive nzvimbo chena yemvura uye pamwe isina kuenzana pasirese. Aya mahewu anokwezva mudunhu revashanyi vanosvika 19,000 vemitambo yemvura gore rega rega uye vanopa rubatsiro rwakakura kugadzirwa kwekushanya kweUganda nekugona kukwikwidza senzvimbo yekuenda kunopikisa vavakidzani vemunharaunda, iRwanda neKenya. Imwe yema rapids, iyo Nile Special, inoonekwa seimwe yepamusoro freaking kayaking rapids mupasi rose uye mumaonero eE & D zviri pachena kuti zviwanikwa zvepamusoro zveUganda maererano nemari yemari yekushanyirwa inogadzirwa pasikweya mita. Dai ikakwidziridzwa kumugariro wayo izere Uganda ingangowana mari inofungidzirwa US $ 4.8 mamirioni emadhora mukutsinhana kwekune dzimwe nyika kubva muchikamu ichi chemamirioni zana nemakumi mashanu, pamwe chete nevekunze venhau.
Dziva rakakwirira kwazvo reIsimba Dam rinosiya chete mashanu emvura akasara asi zvichinyanya kukosha nekuda kwechimiro uye chinhambwe pakati pawo, haizosiya Jinja kana Uganda ine ruzivo rwekutengesa rafting. Vashanyi vekayaking vaizorega kufarira Uganda. Iyo yepakati nhanho Isimba Dam imwe nzira icharamba ichisiya rafting chigadzirwa kunyangwe iyo yakadzikira iyo isingaite kuti iwedzere kuwedzera kana kukwezva manhamba uye inozopedzisira yaita kuti huwandu hweva kayaker huderere.
Isimba Hydropower Project ndeimwe yenzira huru uye diki dzekugadzira magetsi dzinowanikwa kuUganda, zvakadaro danho repamusoro soro riri kukurudzirwa senzira inosarudzwa inotakura njodzi dzakakura dzekushanya, imwe yemamwe matunhu makuru eUganda uye kunobva vekunze. exchange.
Panyaya yekuzadzisa danho rakazara rekuvandudza, E & D inokurudzira kuti chete nzira yepasi peIsimba ndiyo inofanirwa kutariswa pamwe nekuvandudzwa kwezvimwe zvinotsiva zvechizvarwa. Iyi sarudzo, ichiri kuwedzera huwandu hwekugadzira magetsi muUganda, ichadzivirira kurasikirwa kwechuma yakasarudzika iyo parizvino uye ichawedzera mune ramangwana inopa mupiro wakakura kuGDP yeUganda kuburikidza nekushanya.
Izvi zvakare zvinoratidza maitiro evanokurudzira purojekiti uye vanofarira mari vanoshaya mutsika nehunhu hwemasangano epasirese, anozvidavirira kune nyika dzakabudirira, kusava nehanya nevabatanidzi nekupokana nekushora kwavo nekuisa parutivi, kana zvisingaenderane nehurongwa hwavo hwezvinhu. .
Chinyorwa cheUganda pachacho chibvumirano cheoffset chakatariswawo sekuyedzwa kwakaitwa kanoverengeka kuchera chikamu chechina cheMabira Forest, kana mahekita zviuru zvinomwe epakati pesango remvura, kuti ishanduke ive minda yenzimbe, kunyanya kune mumwe wevashambadzi vashoma venyika vanogadzira shuga, vaive nezvimwe zvakawanda zvekushambadzira kuwedzera maekare avo pasi pekurima asi vakaedza kuisa maoko avo pachipo chemahara. Kutevera kuratidzira kwakapararira uye kuratidzira kweropa muKampala, zvisinei, zvirongwa izvi zvakazovharirwa uye tinovimba kuti hazvizombomutswazve. Ikoko, Uganda sezviri pachena yaive mukukanganwa pamusoro pezvibvumirano zvakasainwa muna 7,000 kana kuti zvimwe vachiedza nemaune kutyora chibvumirano, zvikaita kuti vafungire kuti mafungiro akafanana anogona kukunda chirongwa cheIsimba hydro-magetsi uye kukwirira kwedamu .
Vemunharaunda, vematunhu, uye vepasi rose vanochengetedza, zvisinei, vari kutarisa nemaziso ehungwe kuti tsamba nemweya wechibvumirano chakatemerwa chiri kutevedzwa, uye kusvika pakuzara, kuitira kuchengetedza nharaunda, kusiyaniswa kwemupata wepamusoro weNile, zvido zvemunharaunda, uye kufarira kweanoshamisira ushanyi hwehukama.
India inokanda nzira dzakavhurika dzendege kumakambani akazvimirira
Vafudzi vepasi rese & vemunharaunda grillmasters kukanda pasi kuGuam BBQ Block Party